के हजुरले प्रदुषित जापानको तिन रोगको कथा सुन्नु भएको छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > History > के हजुरले प्रदुषित जापानको तिन रोगको कथा सुन्नु भएको छ ?
आज जापान सफा र स्वछ वातावरण भएको देश मानिन्छ। यो देशमा प्रदुषणको समस्या थियो भन्ने सुन्दा हजुरहरुलाई बिस्वास लाग्दैन होला। तर यो सत्य कुरा हो, जापानमा एक ताका प्रदुषणको समस्या निकै जटिल थियो। दोश्रो विश्व युद्धको अन्त्य पछि जापानले जुन गतिले बिकाश गर्यो। त्यो देखेर जुन सुकै देश पनि आश्चर्य चकित पर्दछन। बार्षिक १०% को बृदी दर संगै जापान दिन दुइ गुना रात चौगुना विकशित हुदै थियो तर त्यतिनै मात्रामा यो देश प्रदुषणको चपेटामा परि रहेको थियो। १९६०को दशक तिर नाईट्रोजन डाई अक्साईड, कार्बोन मोनोअक्साईड र सल्फर डाई अक्साईडको मात्रा जापानको हावामा तिन गुनाले बृदी भएको थियो। प्रदुषणले निम्त्याएको अनौठा रोगहरु जपनिमा देखिन थालेको थियो। यी तिन रोगहरु: मिनामाता रोग, योक्काईचि दम र इताई इताई रोग हुन्। यी रोगहरु कति भयानक थिए त, आज हजुरहरुलाई प्रदुषित जापानको अनौठा रोगको जानकारी गराउने छु।
१. मिनामाता रोग
यो रोगलाई चिस्सो-मिनामाता रोग पनि भनिन्छ। यो न्युरोलोजिकल रोग मर्करी पोइजनिङ्गले गर्दा हुन्छ। सन् १९५६ तिर पहिलो चोटी यो रोग कुमामोतो प्रान्तको मिनामाता भनिने ठाउमा देखिएको थियो। भनिन्छ यो रोग चिस्सो भनिने जापानी कम्पनीले निम्त्याएको हो। चिस्सो कम्पनीको केमिकल कारखाना बाट फोहोर पानिमा मिसिएको मिथाईल मर्करीले गर्दा भएको हो। यो केमिकल फोहोर मिनामाता बेमा सिधै मिसाउने गरिएकोले माछा र घोंगीमा मर्करी जम्मा हुने गर्दथ्यो। त्यहि सी फुड त्यहाँका मानिसले खानाले उनीहरुमा मर्करी पोइजनिङ्ग देखिएको हो। यो रोग लागेको मानिसहरुमा हात खुट्टा लाटो हुने, मासु गल्ने, आखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, बोलि नफुट्ने जस्ता लक्षन देखिन्छ। केहि दिनमै प्यरालाईसिस हुने, बिरामी कोमामा जाने र मृत्यु हुने गर्दछ। सन् २००१ सम्म यो रोग लागेका बिरामीहरुको संख्या २,२६५ रहेको थियो जसमध्य १७८४ जनाको मृत्यु भएको थियो। पछि यो रोग जापानको निगाता भनिने ठाउमा पनि देखिएको थियो।
Shema Zackさん(@shemazack)がシェアした投稿 – 2019年 3月月27日午前6時17分PDT
२. योक्काईचि दम
योक्काईचि, जापानको मीए प्रान्तको सबै भन्दा ठूलो सहर हो। सन् १९६० तिर जापान सरकारले उर्जाको लागि कोइला भन्दा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता बढाउन खोजेको थियो। उसको लक्ष जापानीहरुको कमाई १० वर्षमा २ गुणा बढाउनु थियो। यहि कारणले जापानले योक्काईचि क्षेत्र तिर थुप्रै पेट्रो केमिकल कम्प्लेक्स बनाउन सुरु गरिएको थियो। उर्जाको लागि बालिने पट्रोलियम पदार्थ मध्य पूर्वी एसिया बाट निर्यात गरिनथ्यो। यी पदार्थमा सल्फरको मात्र थुप्रै हुने भएकाले, बाल्दा वाताबरणमा ठूलो मात्रमा सल्फर डाई अक्साईड निस्कियो। सेतो सल्फर्को धुवाले योक्काईचिको आकाश पुरै ढाकेको थियो। यहि कारणले योक्काईचिक बासिन्दाहरुमा क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पुल्मुनारी डिजिज (COPD ), ब्रोनकाईटिज, दम जस्ता स्वास प्रशासको रोग देखिन थाल्यो। इसे बेमा पाईने माछाहरुको पनि स्वाद नमिठो भएकोले माझीहरुको ब्यापार पनि घटेको थियो। सोधकर्ताहरुको अध्ययनले योक्काईचिका बासिन्दाहरुमा मृत्यु दर १०-२० गुणाले बढेको देखाएको छ।
३. इताई इताई रोग
जापानी भाषामा “इताई इताई” भनेको “अईया, दुख्यो” हो। यो रोग जापानको तोयामा प्रान्तका बासिन्दाहरुमा क्याड्मियम पोइजनिङ्गले गर्दा देखिएको हो। तोयामा जापानमा खनिजहरु पाइने क्षेत्र हो। यहाँ खनिजको उत्खनन १५८९ देखिने हुने गर्दथ्यो। तोयामाको कामिओका माईनलाई संसारकै ठूलो माईन भनिनथ्यो। माईनिङ्गले गर्दा त्यहाँको जिन्जु खोलामा निकै प्रदुषण भएको थियो। यो खोला किसानहरुले खेतिमा प्रयोग गर्दथे। त्यसै गरि फेदीमा बस्ने मानिसहरु यो खोलाको पानि लुगा धुन, माछा मार्न, र खान प्रयोग गर्दथे। माइन बाट निस्कने क्याड्मियम पानीमा मिसिएको हुनाले, खेति गरिएको धानमा होस् या मारिएको माछामा होस् क्याडमियमको मात्रा हुने गर्दथ्यो। यी कुराहरु खानाले तोयामाका मानिसमा पनि क्याड्मियम जम्मा हुन थाल्यो। इताई इताई रोगले मानिसको स्पाईन र जोर्नीमा असर गर्ने गर्दछ। क्याड्मियमले मानिसको हाडलै कमलो बनाउने र किड्नीमा पनि असर गर्दछ। यो रोगलागेपछि जिउ सहनै नसक्ने गरि दुख्ने भएकोले यसलाई इताई इताई रोग भनिएको हो।
Yuuki Toyodaさん(@yuuki_toyoda)がシェアした投稿 – 2019年 1月月19日午後3時53分PST
जापानको विकाश एकै रातमा सम्भब भएको पक्कै हैन। जापानले यसको लागि अनेक थरिको मूल्य चुकाउनु परेको थियो। ति मध्य प्रदुषण पनि एक थियो। जापान आज संसारकै सबै भन्दा सफा देश मध्य एक हो। प्रदुषणले गलाएको जापानले जुन नीति, नियम र परिश्रमले प्रदुषण हटायो, यो विस्वमा अहिले विकाश र प्रदुषणको चपेटामा परेका देशको लागि राम्रो उदाहरण हुन सक्दछ।
epidemic by pollution